Cabsida Xamar ka jirto waa badan tahay!!! =Faallo=
Friday February 28, 2020 - 21:46:59 in Wararka by Mogadishu Times
Cabsida Xamar ka jirto waa badan tahay, Dagaal ka cabsan meeyno horaan u soo aragnay, Cornoverus ka cabsan meeyno caalamkaa nala wadaago, Geeri ka cabsan meeyno waa waajib in la dhimanayo. Waxaan ka cabseynaa Mashruuca silic u dilka bulshada iyo H
Cabsida Xamar ka jirto waa badan tahay, Dagaal ka cabsan meeyno horaan u soo aragnay, Cornoverus ka cabsan meeyno caalamkaa nala wadaago, Geeri ka cabsan meeyno waa waajib in la dhimanayo. Waxaan ka cabseynaa Mashruuca silic u dilka bulshada iyo Horuumarinta Mukhaadaraadka. Aduunka oo dhan Xashiishku waa mamnuuc Qofkii lagu qabtana waa dambi, intaan ka eheyn Somaliya Gaar ahaan Mogadishu. Waxaa jiro Mashruuca Horuumarinta iyo Casiryeeynta Xashiishka, Xishiishka hore waxaa loogu Duubi jiray warqad yar si looga dhigo qaarbka Sigaarka oo kale. Hadda waxaa la keenay Dalka waraaqo yar yar oo Cad cad oo ku dhax jiro Baako yar,oo laga keenay Tanzania, Hindia iyo wadamo kale, laagana soo galiyo Dekada & Airport -ga iyaga oo ganacsi ah, Dowladuna canshuurto.( F.S:1, 2 &3aad), waxaa dhinac yaal "Taabuugii" Dilaaga ahaa ee aan hore uga soo hadalnay ( F.S:4aad)
Waxaa lagu iibiyaa Suuqyada , wadooyinka Magaalada iyo Gaarigacanada. waxaa Daawanay 30 daqiiqo oo saf loogu jiray iibsiga waraaqaha Xashiishka, Nin Gaarigacan ku iibinayay wadada dhaxdeeda, waxaan dareemay in tirida Dadka Xashiishka isticmaalo ey badan yihiin. Halka lagu iibinayay waxa ey aheeyd Masjidka meel u jirtay 10 mitir, Ciidamo ayaan meesha joogay.
War Ummadda iyo Caruurtu aan u helno sharci ka ilaaliyo Xasuuqa ku socdo. waa iga Tallo.